M-Varotra dia mandroso | Martech Zone
M-Commerce dia mandroso
Talata, Febroary 19, 2013 Zoma, Febroary 15, 2013 Jenn Lisak Golding
Tsy misy isalasalana ny amin'izany. Mihamaro ny mpampiasa mividy takelaka ary mampiasa azy ireo amin'ny e-varotra noho ny fahamoran'izy ireo omena. Ny tatitra farany avy amin'ny eMarketer dia manamarina izany ary maminavina a firongatry ny varotra takelaka, mamadika ny indostria m ho orinasa 50 XNUMX tapitrisa $ amin'ny taona ho avy.
Ny fandaniana amin'ny varotra finday amin'ny ankapobeny, anisan'izany ny takelaka sy ny finday avo lenta, tamin'ny 2012 dia $ 24.66 miliara, ary io isa io dia nampiseho fiakarana 81% tamin'ny isa 2011. Isa mahagaga tokoa izany.
Ny tatitra eMarketer dia maminavina ny fandaniana ecommerce tanteraka amin'ny fitaovana tablette fotsiny mba hikasika $ 24 miliara amin'ny faran'ny 2013 ary avy eo dia hitombo avo roa heny ao anatin'ny taona iray hikasika $ 50 miliara amin'ny faran'ny taona 2014. Ny totalin'ny varotra m-varotra finday dia manodidina ny $ 39 miliara tamin'ny 2013.
Amin'ny 2013, ny 15% amin'ny varotra rehetra dia antenaina fa avy amin'ny finday, miaraka amin'ny takelaka irery ihany no mitaky 9% nanjakan'ity pie ity. Amin'ny taona 2016, ny takelaka fotsiny dia hanana 17% manan-danja amin'ny varotra rehetra.
Antony lehibe mahatonga ny fiakaram-bidy ny tahan'ny fitomboan'ny tahan'ny fananganana takelaka, satria mihamaro ny olona mividy an'ity fitaovana vaovao ity. Miharihary izany amin'ny vanim-potoana fialantsasatra vao vita. Nahatratra 2012 tapitrisa ny fampahavitrihana fitaovana vaovao tamin'ny Andro Krismasy 17.4, miakatra be avy amin'ny fampidirana fitaovana vaovao 6.8 tapitrisa tamin'ny 2011. Araka ny fomban-drazana, ny tahan'ny fitaovana vaovao dia smartphone efatra isaky ny takelaka. Fa nahagaga indray ny Andron'ny Noely 2012, fa ny 49% amin'ireo fitaovana vaovao 17.4 tapitrisa no navadika dia takelaka tokoa.
Ireo mpivarotra izay maniry ny hijanona amin'ny asa aman-draharaha amin'ny taona ho avy dia tsy afaka intsony ny tsy miraharaha ny marketing takelaka. Na dia mifantoka amin'ny m-varotra ity dia ilaina ny mahatakatra ny fiantraikan'ireto isa ireto amin'ny fomba fiovam-po hafa koa. Ny làlan-kizorana amin'ny marketing dia mitaky teboka marobe mikasika ny fahatsinjovana fotsiny hahazoana fivoriana hipetraka. Raha tsy voatsara ny atin'ny findainao dia tsy afaka mijery sy mikaroka ary mahafantatra ny marikao izy ireo. Manatsara ny tranonkalanao. Manana antso-mavitrika mazava sy sahy. Midira amin'ny lalao!
Tags: Content Marketinge-varotraM-varotraFivarotana finday sy tablettetakela-bato
Fanontaniana 12 ho an'ny famolavolana pejy fandraisana